Bixiyeyaasha Adeegga Emailka ayaa ka booday Shark | Martech Zone
Sabti, Febraayo 20, 2010 Axad, Juun 28, 2015 Douglas Karr
Haddii ay dhacdo in aadan weligaa baran waxa ereyga “Jump the Shark” u dhigan yahay… macnaheedu waa in ay tahay bilowgii dhammaadka. Ereygan waxaa loola jeedaa Maalmo Farxad leh markii Fonz uu ku dul booday shimbiraha barafka biyaha, isagoo ku tuuray riwaayada dhimashadii waligeed aysan ka soo kaban.
Haddii aad tahay adeeg bixiye emayl, ha igu qaylin weli.
Emailku wuxuu ahaan jiray shaqo aad u adag oo kaliya kuwa diraya ee ugu weyni waxay lahaayeen karti, qalab, iyo codsiyo ay ugu diraan tiro badan oo emayl ah Bixiyeyaasha Adeegga Internetka ee shirkadaha leh liisaska macaamiisha ee waaweyn. Awoodda ayaa bilowday inay ku dhex wareegto warshadaha, qalabka ayaa noqday mid aad u tiro badan (gaar ahaan daruuraha) iyo codsiyada ayaa ka soo baxaya bidix iyo midig si ay u diraan emayl.
Warshadaha Emailka ayaa is badalay… waa ka jabanyihiin oo si fudud hada ka muuqdaan
Waxa ka socda warshadaha waa tiro yar adeeg bixiyaasha emaylka soo boodaya Iyagu waa kuwa fantastik ah - waxay leeyihiin codsiyo waaweyn, soo diraan farriimo firfircoon oo aad u adag, si fiican ula soco, la macaamil bounka, arrimaha samatabbixinta, u hoggaansamaan qawaaniinta SPAM, oo leh habab is-dhexgal aad u adag oo caadi ahaan bilaash ah. Waxayna ku samaynayaan qayb yar oo ka mid ah kharashka wiilasha waaweyn.
Tusaale ahaan waa tusaale: Newsberry uun noqday kafaala qaaday Martech Zone (taasi waa shaacintayda). Markii aan hubinayay boggooda kahor intaanan ansixin xayeysiinta, waxaan eegay boggooda qiimeynta waxaanan la yaabay qiimaha:
Waxaan heli karaa liiska macmiisha oo gaaraya ilaa 100,000 iyo dir e-mayl aan xad lahayn iyaga $ 530 bishiiba? Taasi waa in yar oo ka badan $ 6,000 sanadkii. Waxaan xasuustaa markii aan ka shaqeynayay adeeg bixiyaha emaylka in khidmooyinka sanadlaha ah ee meheradaha yaryar ay ku saabsanaayeen… oo lagu daray khidmadaha fariinta… oo lagu daray API marin… lagu daray, lagu daray, oo lagu daray…
Kuwani bixiyeyaasha emayllada aadka u adag waxay sii wadi doonaan inay toogtaan oo ganacsiyada emayllada diraya waxay noqonayaan kuwa ugu dambeeya ee guuleysta. Kuwa khasaaray ayaa ah kuwa bixiya adeegga e-mayl aad u tiro badan oo in muddo ah soo jiray - waxbaa u baahan in la beddelo.
Bixiyeyaasha Adeegga E-mailka ee Weyn ayaa si xad dhaaf ah u shaaciyey Midabkooda ku saabsan Samatabbixinta
Qaar badan oo ka mid ah bixiyeyaasha adeegga emayllada waaweyn ayaa kuu sheegi doona in tirada emayllada ay dirayaan ay siinayaan awood ay ku leeyihiin warshadaha oo ay leeyihiin heerar gaarsiin wanaagsan iyo xiriiro ay la leeyihiin Bixiyeyaasha Adeegga Internetka.
Run maahan. Bixiyeyaasha Adeegga Email-yada Yaryar ayaa qaban kara shaqo aad u weyn.
Saaxiibkeyga wanaagsan Greg Kraios wuxuu maamulaa qaar ka mid ah cilaaqaadkaas ka dhexeeya shirkadaha bixiya adeegga iimaylka iyo bixiyeyaasha adeegga internetka ee shirkadiisa, Diidka samatabbixinta. Wuxuu xitaa ka caawiyaa shirkadaha maareynaya emayladooda inay u maraan ISP-yada! Ma qaadanayso shirkad weyn - waxay u baahan tahay khabiir ku xeel dheer arrimaha xariirka wanaagsan - Gregna wuu leeyahay.
Maxay Macaamiisha Email U Baahan Yihiin
Adeeg bixiyaasha emaylka waa inay ahaadaan kuwo si habsami leh (oo waxaan ula jeedaa si habsami leh) oo lagu dhex daro nidaamyada maareynta maareynta, nidaamyada maaraynta xiriirka macaamiisha, qalabka soo dejinta bogga soo degida, iyo Analytics codsiyada. Iibiyeyaasha otomaatiga suuqgeynta sida Aprimo iyo Eloqua ayaa haddaba ka baxaya hoggaanka kuwan. Kuma filna inaad dirto oo aad cabirto emaylka mar dambe… shirkaduhu waxay u baahan yihiin wax badan!
Xitaa wax yar, xallinta qiimaha otomaatiga emaylka ee dhexdhexaadka ah ayaa soo baxaya, sidoo kale! Infusionsoft waa xalka e-maylka iyo xalalka maaraynta xiriirka macaamiisha oo si buuxda isku dhafan.
Macaamiisha waxay u baahan yihiin inay si fudud uga soo celiyaan waxyaabaha ay ka kooban yihiin dhammaan warbaahinta, si firfircoon ugu hagaajiyaan waxyaabaha duulaya, cabbiraan natiijooyinka - iyo xitaa in la siiyo jawaab celin ku saabsan wixii guuleystay iyo lumay. Ma lihin waqti aan uga soo boodno xalka iibiyaha una gudubno xalka iibiyaha inta lagu jiro maalinta… oo aan isku dayno inaan dhammaan xirno Analytics wada hadal… iyo falanqeeyaan fursadaha. Adeeg bixiyeyaasha emaylka waxay u baahan yihiin inay u gudbaan baahideena.
Waa waqtigii bixiyeyaasha adeegga emaylka ay ka boodayaan, ama ay ku afuufi doonaan. Mailchimp waxay ku dhawaaqday 250,000 oo xisaab ah oo lagu daray 7 bilood gudahood xalkooda. Laakiin xitaa Mailchimp aad ayuu qaali u noqday markii aan liiskeenna si guul leh ugu kornay. Waan ka daalnay biilasha waaweyn ee billaha ah sidaa darteed waxaan dhisnay CircuPress - xal qurux badan oo dhammaystiran oo WordPress ah oo isku dhafan oo noo badbaadinaya xirmo isla markaana otomaatig ah warsideyaashayada.
Adigu-Is-Is-Adeeg Bixiye Email
Emailku wuxuu soo qaatay waqti dheer, oo faa'iido badan - laakiin way ku dhowdahay. Uma baahna dadaal badan in la dhiso oo la ilaaliyo adeegga emaylkaaga maalmahan. Saaxiibkii Adam Small aad buu uga dheregsanaa qiimaynta iyo la'aanta hababka otomatiga ah, ee uu dhowaan isagu isagu u dhisay Suugada WakiiladaHada wuxuu heystaa mobilka, maaraynta maareynta, Facebook, Twitter iyo emayl si dhameystiran loogu dhex daray macaamiishiisa guryaha. Xitaa wuxuu awood u leeyahay inuu kormeero soo-saarista, raad-furidda iyo dhagsiinta iyo maaraynta boodhadhka!
Haddii aadan hibo u lahayn sida Adam, waad aadi kartaa iibso a sanduuqa ka soo jeeda dadka sida Postmail, ku xidho, shid, oo adeeg email kuu gaar ah ayaa socda oo socda. Waxay xitaa kaa caawin doonaan inaad bilowdo.
Adiga-U-Adiga-Bixiyeyaasha Adeegga Emailka
Qaar badan oo ka mid ah bixiyeyaasha adeegga iimaylka iyo hay'adaha ayaa runtii ku daraya adeegga xirmada sidoo kale. Waxay garwaaqsanyihiin in dhisida emayllo qurux badan, oo qasbaya ay qaadanayaan waqti iyo khibrad labadaba - waxayna leeyihiin dib ucelin weyn maalgashiga, sidaa darteed waxay u horumariyaan barnaamijyo macaamiishooda la awoodi karo oo ay ka qaadaan dhammaan dadaalka gacmaha macaamiisha. Lamaane aan ogahay ayaa ah Indiemark iyo Yaanyo (yaanyo).
Sidee Adeeg Bixiyeyaasha Emailka Ugu Noolaan Doonaan
Taladayda ku aaddan bixiyeyaasha adeegga e-mayllada waaweyn ee halkaas ku yaal ayaa ah inay raadsadaan nidaam maareyn maaddo, oo ay iibsadaan. Raadi adeeg bixiye maaraynta xiriirka macaamiisha aad si dhow ula dhex gasho… oo aad ula midowdo iyaga. Hel Analytics bixiyaha, oo si aan kala go 'lahayn u dhexgalaan. Oo ku samee bartilmaameed adag, kala-soocid iyo xalal tijaabin ah. Haddii aadan sameyn, qof ayaa dhaqso u heli doona!
Tags: circupressadeeg bixiyaha adeegga emaylkagaar ahaanmailchimp
Feb 20, 2010 markay ahayd 3:44 PM
Tani waa maqaal weyn Doug. Waxaa jira xalal badan oo la heli karo hadda si looga caawiyo meheradda inay xoqdo dusha sare ee suuqgeynta iimaylka. Runtii waxaan aaminsanahay in fursada ESP badan ay dhab ahaan tahay wixii ay sanado badan iska joogeen - taasina waa adeegyo. In kasta oo ay faa'iido badan u leedahay inay iibiso oo ay taageerto software-ka, haddana waxay sii kordheysaa iibkeeda sii kordheysa marka suuqa uu noqdo mid cufan sidii uu noqday. Haddii ESPs ay awoodaan inay si dhab ah u siiyaan shirkadaha guul la taaban karo (wixii ka dambeeya softiweerka, laakiin iibso qorshaynta ololaha maraq-ilaa-lowska, nashqadeynta, iyo fulinta) - taasi waa habka ugu habboon in ka badan helitaanka qalab lagu diro emaylka (90% adeegsiga suuqgeynta iimaylka ee suuq geynta) runti waa isku mid). Ku dar adeegyadaas dhibco adag oo is-dhexgal ah oo aad haysato xirmo mudan inaad bixiso.
Febraayo 22, 2010 saacadu markay tahay 10: 11 AM
Kani waa mid ka mid ah qoraaladayda cusub ee aan jeclahay, oo kaliya maahan inaad Indiemark siiso madaxiisa. 🙂
Feb 24, 2010 markay ahayd 5:05 PM
Waxaan badanaa jeclahay inaan ku abuuro emayl gaagaaban iyo jaakad maqaar ah. Taasi miyaanay qabow ahayn? Maqaal weyn. Qeybta ku saabsan adeegyada adiga laguu sameeyo, waxaan jeclaan lahaa inaan ku tuuro davemail (www.mydavemail.com) ikhtiyaar ahaan. Macaamiishayadu inta badan way ka quustaan ​​iskuday ay ku samaynayaan naftooda. Sida ugu casrisan ee badan oo ka mid ah bixiyeyaasha DIY ee internetka ah, maaha kuwo loogu talagalay qof walba. Waad ku mahadsan tahay sharaxaadda xulashooyinka.
Xogta Macaamiisha Tayada ah ayaa fure u ah guusha olole kasta oo suuqgeyn ah. Waxaa jira shirkado aad u tiro badan oo bixiya suuq-geyn email-is-adeeg ah ama kuu sameeya suuq-geyn adeeg buuxa ah. Laakiin, midkoodna lama imaan karo xogta macaamiisha adiga iyo ganacsigaaga mooyee.
Ganacsigu (gaar ahaan dukaanka hore) wuxuu ubaahan yahay inuu helo hab lagu "ururiyo" macluumaadka macmiilka isla markaana loogu xiro ”wixii ay soo iibsadeen (tani waa iska fududdahay dukaamada internetka, laakiin kuma filna dukaamada jireed) nidaamkaaga POS oo u diyaarso macluumaadkaas madal suuqgeyntaada ah (emayl ama sms ama wixii kale). Awoodda dhabta ah ee suuqgeyntu waxay ku jirtaa falanqaynta waxyaabaha macaamiisha jecel iyo waxyaabaha ay neceb yihiin oo si waafaqsan loogu beegsanayo dalabyo habboon.
Jun 13, 2012 saacadu markay ahayd 12:56 AM
Mahadsanid aad baad u mahadsantahay qoraal xikmado badan, runtii waxaan ku helay balooggaaga si qalad ah anigoo ka raadinaya Google wax kale have .waxaan calaamadeeyay bartaada..ha wadaag wadaag ..
Waxaan raadinayaa haddii ay jiraan bixiyeyaal webmail oo macaash la wadaaga dadka ku wareejiya magacyadooda domain adeegsiga boostada?